Moonship: Wedzera Shanduko Nekutenga Kweboka MuShopify Store | Martech Zone
Moonship inotenda kuti ramangwana re ecommerce ndere magariro, uye vari pachinangwa chekugonesa mabhizinesi eese saizi kuti akure zvisina simba kuburikidza ne organic izwi-re-muromo. Hapana kupokana kuti anonyanya kukurudzira waunaye pachigadzirwa chako ishamwari yeshamwari… uye Moonship inosanganisa izvo zvinogoneka zviri nyore nemhando yavo yekutenga sarudzo dzeboka.
Moonship ine 3 akakosha maficha anofambisa shanduko munharaunda Shopify:
Wedzera kugovera kubva kune yako iripo traffic neboka rekutenga tebhu. Iine diki tsoka uye isina musono kusanganisa mune iripo pre-kutenga rwendo, inofambisa migove uye kutumira pasina kupira mutengi ruzivo kana mhando.
Ipa vatengi vako kuderedzwa kuti ugovane neshamwari dzavo pakarepo mushure mekutenga. Iwe unowana mabhenefiti ese ekurongeka kweboka mune ino mamiriro, kunze kwekuti mutengi ari kugovera kubva mukunaka kwemoyo wavo pane kuti vazvidzikisire ivo pachavo.
Ziva, tarisa, uye shandura vatengesi vakawanda pa-the-fence nekuvapa mukana wekujoinha hurongwa hweboka huri kupera. Boost shanduko mazinga anosvika makumi mana muzana neiyo imwe-mbiri punch yekuderedzwa uye humbowo hwemagariro panguva yakakwana.
Gadzirisa chitarisiko chedu uye unonzwa mumaminitsi uye vatengi vako havazoziva kuti brand yako inopera kupi uye Moonship inotanga.
Bhuka Demo kana Sign-Up Iye zvino!
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Moonship uye ndiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo muchinyorwa chino.
Tags: shamwari discountboka kutengaboka rinopawedzera shanduko mitengomwedzipost kutenga chipopre-kutenga discountscommerceshopifysmart group inopakushamwaridzana kutengazvekutengeserana